“Farmaajo oo la soo baxay kibirkii iyo fasaadkii Fircoon” | KEYDMEDIA ONLINE
“Farmaajo oo la soo baxay kibirkii iyo fasaadkii Fircoon”
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa dhaqanka Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo la meel dhigay hab dhaqankii uu Fircoon kula dhaqmi jiray Reer Banii Israa’iil.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka ee waqtigiisu dhamaaday ayaa sharci darro ku tilmaamay, go’aanka amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde loo hoos geeyay Qaybta Guud ee Booliska Gobolka Banaadir.
“Hadda Farmaajo wuxuu gaaray heer uu yiraahdo Turu-bataa-riyada oo ah Hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha”ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde hala hoos geeyo Qaybta Guud ee Booliska Gobolka Banaadir, taasoo sharci ahaan iyo hoggaan ahaanba khilaafsan sharuucda dalka iyo Habdhismeedka Taliska Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed” ayuu yiri Mahad Salaad.
Mahad Salaad, wuxuu xusay in ujeedka laga leeyahay arrintaan ay tahay, in la xaddido dhaqdhaqaaqa Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubaland ee deggan Xeendaab-ka garoonka diyaaradaha Adan Cadde.
“Ujeedada laga leeyahay ayaa ah in ciidamo Farmaajo si toos ah uga amar qaata gacanta loo geliyo amniga garoonka diyaaradaha iyo nawaaxigiisa oo horay ay u joogeen Ciidamada Turu-bataa-riyada iyo kuwa Amisom, si loo xaddido dhaqdhaqaaqa Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubaland ee deggan xerada Xalane, Mucaaradka iyo Musharaxiinta gelaya ama ka soo baxaya garoonka iyo xayndaabkiisa!”. ayuu sidoo kale hadalkiisa ku daray.
Xildhibaan Mahad Salaad, wuxuu hoosta ka xariiqay in Farmaajo uu la mid yahay Fircoon, shacabka, siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay in ay ka hor tagaan qatarta uu soo wado inta uusan birta ka wada aslin.
“Sida muuqata Farmaajo meel ayuu iska dhigay dowladnimo iyo sharci loo hoggaansamo, wuxuuna la soo baxay kibirkii iyo fasaadkii Fircoon kula dhaqmi jiray reer Banii Israa’iil mid la mid ah isagoo dadka u qaybiyay kuwa uu dilo, kuwa uu dullaysto iyo kuwa uu dalacsiiyo oo isaga ugu yeera in uu yahay boqor Ilaahey koonkaan u soo diray sidii Fircoon. Waxaan idinkula talinayaa kolley Farmaajo idinma deyn doono ee talo isugu laabta inta uusan idinla tagin ilaa YA!”. ayuu ku soo gunaanaday hadalkiisa